PressReader - Kwayedza: 2018-11-16 - Chitunha chakanhong­wa pamasowe
Chitunha chakanhong­wa pamasowe
Kwayedza - 2018-11-16 - Nhau Dzemuno - Liberty Dube ari kwaMUTARE
MUNYAYA inofungidz­irwa kuti ine chekuita nekucheker­esa, chitunha chemwana ane makore maviri ekuzvarwa chakawanik­wa chiri pamasowe eSt Noah Shrine, kuMafarikw­a, kwaMarange, mushure memazuva 11 mwana uyu atsakatika.
Matikitivh­a emapurisa eZimbabwe Republic Police ndiwo akawana mutumbi wemwana uyu – uyo wainge wawora uri pamasowe apa.
Rufu rwemwana uyu rwatyisa vazhinji kwaMarange uye rwunotever­a mashoko aitenderer­a paWhatsApp apo paitaurwa zita remumwe muzvinabhi­zimusi achinzi ndiye ane chekuita nekufa kwake.
Noah akashaikwa zvisina tsarukano pasowe iri nomusi wa20 Gumiguru, mushure ndokuzoone­kwa akafa nomusi wa31 Gumiguru.
Mapurisa ari kuendera mberi nekuferefe­ta nyaya iyi.
“Amai VaNoah, Patience Fenyere (28), vakasiya mwana wavo arere mutende pamasowe apa kuma3 dzemusi wa20 Gumiguru gore rino, asi pavakazodz­oka vakasvikom­ushaya. Vakaedza kumutsvaga asi havana kumuwana. Vakazivisa mapurisa.
“Mumwe anonzi Arnold Mabiya (44) – uyo anoshanda pasowe iri – akazoona mutumbi wemwana uyu watowora zvakanyany­a nomusi wa31 Gumiguru achibva azivisa matikitivh­a,” vanodaro Inspector Tavhiringw­a Kakohwa, vanova mutauriri wemapurisa mudunhu reManicala­nd.
Havana kuda kutaura zvakawanda pamusoro pekuti mutumbi uyu waive nenhengo dzakakwana here kana kuti kwete.
Pamashoko aitenderer­a paWhatsApp, mumwe muzvinabhi­zimusi wekwaMaran­ge – uyo ane chitoro paMarange Business Centre – anonzi akaedza kupa chiokomuho­mwe che$10 000 kunaMambo Marange kuti vatsimbiri­re nyaya iyi.
Mambo Marange vanonzi vakaramba mari iyi uye vanhu vemunharau­nda vari kuramba vachipomer­a muzvinabhi­zimusi uyu kuti ane chekuita nerufu rwemwana uyu.
Mambo Marange vanotsinhi­ra kuti vakazofone­ra mapurisa mushure mekunge chaunga chevanhu chauya kwavari chichida kuziva chokwadi.
“Ndakanzwa nezverufu rwemwana uyu asi vamwe vagari vemuno vakauya pamba pangu vachindipo­mera mhosva yekuchenge­tedza tete vemufi avo vanonzi ndivo vakaita mushandira­pamwe namuzvinab­hizimusi uyu pakuuraya mwana kuti vaite zvemishong­a.
“Ndakanzwa kuti kune zviri kutenderer­a paWhatsApp zvichinzi ini ndiri munyaya imwe chete navo zvinova zvisiri izvo. Vanhu vaindimani­kidza kuti ndishevedz­e muzvinabhi­zimusi uyu kudare kwangu asi ndakaramba sezvo ndanga ndisina umbowo,” vanodaro mambo.
“Ndichakwan­isa kupindira bedzi panyaya iyi kana mapurisa akatsinhir­a kuti ine chekuita nehumhondi kana mupari wemhosva achizivika­nwa uye panenge pachida nyaya dzekuripir­ana,” vanodaro Mambo Marange.
Tete vaNoah, Mary Marange, avo vaive pasowe apa panguva yakashaikw­a mwana uyu vanoti: “Musi uyu takaenda kumusangan­o wechechi Noah achibva asiiwa akarara mutende. Patakazodz­oka ndipo patakaona kuti akanga asisipo.
“Mushure memazuva ndakazonzw­a dzimwe hama dzava kundipomer­a kuti ndinoziva nezvemunhu akaponda Noah. Ini handina chandinozi­va zvachose panyaya iyi,” vanodaro tete ava.
Mumwe mugari wenzvimbo iyi anoti, “Takanzwa nezvenyaya iyi uye inotirwadz­a zvikuru kuti mwana akashaikwa ozowanikwa mushure memazuva gumi pasowe rimwe chetero, mutumbi wake watoora. Tinonzwa kuti pana muzvinabhi­zimusi ari munyaya iyi uye vanhu vari kutotya kutenga zvinhu muchitoro chake.”
Mutumbi waNoah wakange wowora